Pireezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqii waa'ee haala Itoophiyaa keessaa maal jedhan?
1 year, 3 months ago 1377 Qoodi
Pireezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqii gaaffiifi deebii miidiyaa mootummaa wajjin taasisaniin, haala Itoophiyaa keessa jiruun yaaddoo akka qaban dubbatan.
Pireezidantichi Roobii galgala Televizhiniifi Raadiyoo biyyaarratti dhiyaachuun waan jedhan ''Biyyoota naannicha keessa jiran kaanirraa caalaa ganna 80f rakkoo keessa dabarsine. Kanaafuu nagaafi tasgabbiin Itoophiyaa keessaa kaan caalaa nu yaaddessa.''
Gahee Ertiraan dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti qabdurratti wayita ibsa kennanis, ''Haga humni keenya eeyyameen [dhimma Itoophiyaa] keessatti gahee keenya bahachaa jirra,'' jedhan.
Gaheen biyyattiin Itoophiyaa keessaa qabdu maal akka tahe garuu ifatti hin keenye.
Pireezidant Isaayyaas loltoonni Ertiraa lola Tigraayitti adeemaa jiru keessatti hirmaachuu fi dhiisuu wanti dubbatan hinjiru.
Haatahu malee pireezidantiin kun bara dabre keessa eessa ''Dhimma Itoophiyaa keessa uumamurratti harka keenya marannee, callisnee hinteenyu,'' jedhanii turan.
Ameerikaa fi Gamtaan Awurooppaa, Ertiraan waraanashee Itoophiyaa keessa jiran akka baaftu gaafatanii turan.
Angawoonni Itoophiyaa keessaa tokko tokkos, Tigraay keessa loltoonni Ertiraa jiraachuu dubbataniiru.
Lola waraanaa Tigraayitti dhalate ilaalchiserratti kan dubbatan.Pireezidant Isaayyaas, TPLF ajaja Kaabaa haleeluun gochaan raawwatan ''maraatummaa isa guddaadha'' jedhan.
Lolli Tigraay keessaa jalqaba Sadaasa 2020 keessa, humnoonni TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa naannicha keessaa haleelan hordofee, tarkaanfii waraanaa Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad kennaniin eegale.
TPLF akka jedhutti, mootummaan Federaalaa dhimma naannichaa gidduu seenuuf waan tureef, buufataalee kanneen dursinee ofirraa ittisuuf haleelle jedha.
Lola waraanaa kana hordofee namoonni miiliyoona lamaa ol tahan qe'eesaaniirraa kan buqqa'an wayita tahu, kanneen 60,000 ol ta'an ammoo daangaa ce'uun Sudaanitti baqataniiru.
Akka UN'tti naannichatti namoonni miiliyoona 4.5 tahan, qarqaarsa atattamaa fedhu.
¤ Isaayyaas maal dubbatan?
Pireezidant Isaayyaas wayita iddoon daangaa Omhaajar banamutti, hoogganaa TPLF kan tahan Dabratsiyoon GabraMikaa'el (PhD) walarganii waanta haasawanis himan. Gaafas Dabratsiyooniin, maaliif humna waraanaa hagana gahu walitti qabaa akka jiran gaafadheera jedhu.
Wayita sana Dabratsiyoon hoogganoonni lamman kun irra deebiin akka walarguuf jiran dubbatanii turan. Haatahu malee walarganii maal akka haasawan garuu ifa hin goone.
Isaayyaas walitti dhufeenya haarayaa Itoophiyaafi Ertiraa danquun TPLF himatan. Daangaan biyyoota lamaanii gidduutti akka hin sararamnes danqaa tahan jechuun dubbatan.
Pireezidant Isaayyaas bakki walfalmisiisaa Baadimmeen,
to'annoo humnoota Ertiraa jala galuufi dhabuurratti waanti
Dhimma Hidhaa Haaromsaa Laga Abbayyaa, akkasumas waldhabdee daangaa Itoophiyaafi Sudaan jidduurratti kan dubbatan Isaayyaaas, ''nageenyaafi fedhii biyyoota lamaanii miidhuun dura'' furamuu qaba jedhan.
Dabaluunis, waldhabdeen kun kan hammaate giddugalummaa qaamota alaafi fedhii siyaasaa keessoo muraasaani jedhan. Haatahu malee pireezidantichi qaamolee alaa kanniin jedhan kana maqaa hin dhoofne.
Siyaasa_Itoophiyaa Isaayyaas_Afawarqii TPLF Eertiraa Itoophiyaa AbiyAhmed
'Eertiraan gabrummaafi koloniif harka hin laanne'- Pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii